चीनमा कोरोनाबाट निको भएका ९० प्रतिशतको फोक्सो ड्यामेज, ५ प्रतिशतमा फेरि संक्र मण – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Corona (COVID-19) Updates/चीनमा कोरोनाबाट निको भएका ९० प्रतिशतको फोक्सो ड्यामेज, ५ प्रतिशतमा फेरि संक्र मण
काठमाडौँ। कोरोनभाइरसको केन्द्रविन्दु रहेको चीनको हुबेइ प्रान्तको वुहान शहरमा ९० प्रतिशत कोरोनाभाइरसबाट मुक्त भएकाहरुको फोक्सो खराब पुष्टि भएको छ। चीनको चिकित्सकहरुको टोलीकाअनुसार वुहान शहरमा कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित भइ निको भएकामा ९० प्रतिशतको फोक्सो ड्यामेज भएको दाबी गरेको समाचार माध्यम ग्लोबल टाइम्सले जनाएको छ।
उक्त चिकित्सकहरुको टोलिको नेतृत्व वुहान युनिभर्सिटीको झोङनान अस्पतालका निर्देशक पेङ झियोङले गरेका हुन्। उनले अप्रिल महिनादेखि १०० जना कोरोना मुक्त भएका बिरामीको फ्लोअप गर्दा यस्तो पाइएको ग्लोबल टाइम्सले जनाएको छ। ग्लोबल टाइम्स्का अनुसार संक्रमण भएर निको भएकाहरुको स्वास्थ्य अवस्थामाथि अनुसन्धान गरिरहेको वुहान विश्वविद्यालय अन्तर्गतको झोंगनान अस्पतालका निर्देशक पेंग जियोंगको टोलीले गरेको नमुना अनुसन्धानमा यस्तो देखिएको हो।
उनीहरुले गत अप्रिलबाट संक्रमण निको भएका केही मानिसहरुमाथि अनुसन्धान थालेका थिए। त्यसअनुसार ती मध्ये ९० प्रतिशत मानिसको फोक्सो अझै पनि निको नभइसकेको देखिएको हो, भने ५ प्रतिशत मानिसमा फेरि संक्रमण देखिएको छ। निको भएका बिरामीहरू अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि तीन महिना पछि पनि अक्सिजन मेसिनको भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । उक्त रिपोर्ट अनुसार निर्देशक पेंगको टीमले १०० जना कोरोना निको भएका मानिसहरुमाथि अध्ययन गरेको थियो।
पेङका टोलीहरुले कोरोनामुक्त भएका बिरामीको पैदल परिक्षण गर्दा उनीहरु ६ मिनेटमा ४०० मिटर हिँडेको जबकी उनीहरूका स्वस्थ साथीहरूले समान अवधिमा ५०० मिटर हिंड्न सक्ने पत्ता लगाएका छन्। अन्वेषकहरुका अनुसार स्वास्थ्यलाभ भइ डिस्चार्ज भएको तीन महिनापछि पनि उनीहरु अक्सिजनमा बसेको चिकित्सक लियाङ टेङशिआओ बताएका छन्। उनले उक्त अध्ययन ६५ वर्ष भन्दा बढी उमेर भएकामा गरेका थिए।
एक सय कोरोनामुक्त भएकाहरुको परीक्षण गर्दा १० प्रतिशतमा कोरोनाविरुद्ध लड्ने एन्टीबडी एकदम कम भएको अध्ययनका नतिजाले देखाएको ग्लोबल टाइम्सले जनाएको छ। साथै १०० बिरामीको प्रतिरक्षा प्रणाली पूर्ण रूपमा अझै सुधार नभएको र उनीहरु डिप्रेसन र सामाजिक भेदभावबाट ग्रसित रहेको छन्।
थप ७ जनामा कोरो`ना पु`ष्टि, कु`ल सं`ख्या २५० पुग्यो !!
उपत्यकामा दिन प्रतिदिन कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै, ढलको पानीमा समेत कोरोना देखियो ?
कोरोनाबाट निध`न भएकाको शव परिवारले समेत छुन पाएनन , भयो परिवा`मा रुवा`बासी…(हेर्नु`होस भिडियो)